Seynisyahanno ogaaday sababta “walwalka uu cirro u sababo”
Home Muraayad Seynisyahanno ogaaday sababta “walwalka uu cirro u sababo”
cirrada maxaa sababa? - Social
Seynisyahanno ayaa sheegay in ay suuragal tahay in la helay sababta uu walwalka u sababo cirro ama timaha cad. Sidoo kale waxay sheegeen in ay jirto wadoo muhiim ah oo looga hortagi karo ka hor inta aysan billaaban.
Tijaabo lagu sameeyay doolli waxaa lagu ogaaday in unugyada maamula haragga iyo timaha jirka midabkooda uu is bedelay ka dib markii si wayn uu u walwalay jiirkaas.
Isbuucyo gudahood ayuu dooliga oo madow ahaa isku bedelay midab ahaan, wuxuuna noqday caddaan.
Cilmi baarayaasha ka socday Mareykanka iyo Brazil waxay sheegayaan arrintan ay u baahan tahay in baaritaanno dheeraad ah lagu sameeyo si dawo loogu helo cirrada ay sababto da’da.
Rag iyo dumar ba waxay cirrada ka soo bixi kartaa marka ay gaaraan dad;a 30-meeyada.
In kastoo dadka qaar ay u tahay wax da’ la xiriira ama dhaxal, haddana waxaa la cadeeyay in walwalka iyo walbahaarka ay kaalin wayn ka qaataan in timada ay caddaadaan.
Balse Seynisyahannada ma oga sida dhaf=bta ay ee walwalka uu u saameeyo timada madexeenna ku yaalla.
Cilmi baarayaasha sameeyay baaritaanka lagu daabacay wargeyka Nature ee Jaamacadaha Sao Paulo iyo Harvard, waxay aaminsan yihiin in arrintan ay ka dhalato unugyo jirka ku dhasha ka dib qaangaarka oo si gaar ah u saameeya haragga. Waxay unugyadaas soo saaraan maado loo garanayo melanin taas oo masuul ka ah midabka timaha iyo maqaarka.
Intii uu socday baaritaanka lagu sameeyay jiirka, waxay heleen cadeyn muujineysa in arrintaas ay tahay sababta dhabta ah.
“Hadda waan ognahay in walwalka uu masuul ka tahay isbedellada gaarka ah eek u dhacaya haraggeena iyo timaheena iyo sida ay u shaqeeyaan,” ayuu yiri Prof Ya-Cieh Hsu, oo ah qoraaga cilmi barista oo ka tirsan Jaamacadda Harvard.
‘Dhibaatada waa mid joogto ah oo aan la daweyn karin’
Xanuunka uu jiirkaa dareemayay waxaa ka dhashay in jirka uu siidaayo maadooyiinka adrenaline iyo cortisol, kuwaas oo sababay wadno garaac saa’id ah iyo dhiigkar. Sidoo kale wuxuu saameeyay hannaanka neerfayaasha oo ka dhashay walwal daran.
Hannaankaas wuxuu ka dib u gudbau unugyada melanin ee timaha.
“Waxaan filayay in walwalka uu u xun yahay jirka,” ayuu yiri Prof Hsu.
“Balse saameynta lama filaanka ah ee walwalka uu sababay ee aan ogaanay waa wax aanan horey uga sii fakarin.
“Dhowr maalmood ka dib dhammaan unugyadii sameynayay midabka timaha ayaa la waayay.
“Mar haddii unugyadaas ay baaba’aan dib looma soo celin karo – dhibaatada waa mid joogto ahaaneysa.”
Previous article6 xirfadood oo aad u baahan tahay in aad yeelato si aad hoggaamiye u noqoto
Next articleShan xaqiiqo oo ku saabsan Qurba-joogta Soomaalida ee daafaha dunida –